Fahapoizinana ara-tsakafo :: Olona iray maty, roapolo hafa narary nandritra ny mariazy • AoRaha
Fahapoizinana ara-tsakafo Olona iray maty, roapolo hafa narary nandritra ny mariazy
Lanonam-panambadiana nitera-doza. Olona manodidina ny telopolo no tsy maintsy naiditra hopitaly tetsy amin’ny Hjra, ny sabotsy alina lasa teo, vokatry ny fahapoizinana ara-tsakafo nihatra tamin’ny fianakaviana maromaro nanatrika lanonam-panambadiana iray, tany Ankazondandy. Olona iray tamin’ireo nasaina kosa no namoy ny ainy, voalaza fa teny an-dalana hihazo ny hopitaly.
Araka ny fantatra, dia nihinana sakafo tsy azo antoka loatra nandritra ny lanonam-panambadiana, tany Anosivola , kaominina Ankazondandy, izy ireo ny marainan’ny sabotsy. “Namonjy mariazy izy ireo raha ny fantatra ary nividy tamenak’atody naodina niaraka tamin’ny menaka na “mayonnaise”, tamin’ny boaty, ny fianakaviana. Efa vita tamin’ny telo ora maraina anefa ny sakafo raha tamin’ ny iraika ambin’ny folo antoandro vao nohanina ka nivadika ilay akora. Narary kibo be sy nandoa ary nivalana izy ireo”, araka ny fitantaran’ny olona akaiky ny marary iray teny amin’ny hopitaly, omaly.
Nanazava ihany koa ny mpitsabo fa sakafo nahitana hena efa voahodina na “charcuterie” efa novidiana telo andro mialoha ny sakafo no isan’ny nahatonga an’ izao fahapoizinana izao. Voalaza fa anisan’ireo narary ihany koa izy roa kely tompon-draharaha.
Tsy misy ahiana
Araka ny fanazavan’ ny dokotera Rakotonindrina Christian, mpitsabo niandry marary tetsy amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona na Hjra, omaly, dia: “olona roa sisa no notazonina tao amin’ny hopitaly mba harahina maso ny fahasalamany fa ny sisa efa nody avokoa”. Nohamafisiny fa tsy nisy maty teo anivon’ny hopitaly ireo narary noraisina tao fa voatsabo soa aman-tsara daholo.
“ eny an-dalana ho aty amin’ny hopitaly no namoy ny ainy ny marary iray ka noentin’ny fianakaviana niverina”, hoy ny fitantaran’ilay fianakavian’ny marary.
Araka ny toromariky ny mpitsabo, dia ahitan-doza ny fihinanana karazan- tsakafo sasany, indrindra amin’izao andro mafana izao. “Tokony ho tandremana ny fikirakirana ny sakafo misy maiônezy, ny hazandrano misy akora ary ny hena tsy masaka isan-karazany. Misy otrik’aretina mahatonga ny olona marary kibo be sy manavy ary mivalana izy ireo”, hoy hatrany ny dokotera Rakotonindrina Christian.
Fantatra fa nisy tamin’ ireo fianakaviana niharam-boina tamin’ity lanonam-panambadiana ity no nentina namonjy tobim-pahasalamana hafa.
Vahaolan’ny fanjakana Miomana amin’ny drafitra hiatrehana ny krizy ny governemanta
Taratasin’ny fiara sy ny familiana :: Vaky am-batolampy ny ahiahina kolikoly etsy amin’ny ivon-toerana Ambohidahy